नेपाल बायुसेवा निगमा मौलाउँदै भ्रष्टाचार, कोरोना वेवास्ता गर्दै जापान - EKalopati
नेपाल बायुसेवा निगमा मौलाउँदै भ्रष्टाचार, कोरोना वेवास्ता गर्दै जापान
काठमाडौं । अवौं रुपैयाँ घाटामा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगममा भ्रष्टाचार मौलाउन शुरु गरिसकेको छ । भ्रष्टाचारीहरुको अखडामा रुपमा परिचित हुँदै आएको नेपाल वायुसेवा निगममा हुने आर्थिक अनियमितता को अर्को उदाहरण हो जापानको नारिता भ्रमण । सरकारले भ्रमण वर्ष स्थगित गरी नेपाली जनतालाई विदेश नजान आग्रह गरिरहेका बेला बेला राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल बायुसेवा निगमले भने सरकारी टोलीलाई जापान उडाउनु भनेको आर्थिक अनियमितता नै हो निगमकै कर्मचारीको भनाई छ । निगमले जापानको नारिता उडाएका १५ जनाको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने छ ।
अहिलेको अवस्थामा वायुसेवा निगमले मन्त्रीका पिएदेखि सांसदसम्मलाई विदेश किन लैजानु पर्यो ? अहिले विदेश लगिएका १५ जनालाई गरी कम्तिमा पनि ३० लाख भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो खर्चले नेपाल बायुसेवा निगमलाई के फाइदा भयो त्यो खोजिको विषय भने पक्कै हुने छ । इकालोपाटीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको यो भ्रमणमा औचित्यताको विषयमा खोजी गरी पाठक सामु पस्कने छ । कानूनत मन्त्रीका निजी सचिव तथा सल्लाहकारलाई सरकारी रकममा विदेश उडाउन पाईने छैन ।
कसकसलाई लगियो जापान ?
Previous articleयस कारण खुल्यो ७० करोड कमिशनको पोल
Next articleघुस लिएर फिर्ता गर्ने इन्जिनियर र सव इन्जिनियर विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर